Nanambara ny governora Alain Herve Rasolofondraibe fa miakatra sy mihatsara ny tahirim-bola vahiny amin’izao. Efa mihoatra ny tamin’ny faran’ny taona mihitsy aza izany amin’izao 3 volana voalohany amin’ity taona vaovao ity izao. Nanambara ihany koa ny tenany fa tena ilaina ny fahaiza-mitantana sy mikajy tsara izany mba hitera-bokatsoa ara-toekarena ho an’ny firenena. Raha ratsy tantana mantsy dia mety ho very anjavona any fotsiny ka hiteraka fatiantoka mihitsy. Misy hatrany ny fandaharan’asa ataon’ny BFM hahatsara ny fitantanana izay iarahany amin’ny Banky Iraisam-pirenena mba ho tombony ara-toekarena.